ओली कमरेडले बुझ्नुपर्छ, 'स्थायी समिति रत्यौली खेल्ने थलो होइन, छिनोफाने गर्ने ठाउँ हो' - ओली कमरेडले बुझ्नुपर्छ, 'स्थायी समिति रत्यौली खेल्ने थलो होइन, छिनोफाने गर्ने ठाउँ हो' -
ओली कमरेडले बुझ्नुपर्छ, ‘स्थायी समिति रत्यौली खेल्ने थलो होइन, छिनोफाने गर्ने ठाउँ हो’
मिन बहादुर सुनुवार ‘सुमन’ २२ मंसिर २०७७, सोमबार
‘विनाश काले विपरीत बुद्धि ।’ यो निकै चर्चित उक्ति नसुन्ने तपाइँ हामी सायदै होलान् । यसको अर्थ हो–विनाशको बाटो लाग्ने मान्छेको बुद्धि उल्टो हुन्छ । सुल्टो हुन्न । जब मान्छेको बुद्धि र विचार नै उल्टो हुन्छ । अनि उसले उल्टो गरी सोच्छ । यस्तो प्रवृत्तिले उसको विकास किमार्थ हुन्न, विनाश भने स्वाभाविक हुन्छ । आफुलाई मात्र होईन अरुलाई पनि नराम्ररी असर पुर्याउँछ । किनभने आजसम्मको हाम्रो सामाजिक अभ्यासहरुले यहि भन्छ । त्यसकारण, उल्टो बुद्धि हुनेको हविगत दु : खद छ । समाजमा यो मान्यता अकाट्य छ।
आज कसैको बुद्धि उल्टो गरि चल्दैछ भने त्यो व्यक्ती अरु कोहि नभएर कमरेड केपी शर्मा ओलि नै हुन् । प्रधानमन्त्री नै हुन् । देशको प्रधानमन्त्री अनी नेकपाका अध्यक्षको बुद्धि कतै उल्टो हुन्छ ? तपाई यो कुरा पत्याउनु हुन्छ ? पत्याउनुहोस कि नपत्याउनुहोस तर भयो त्यस्तै । किनभने कमरेड ओलिले पार्टी विधि र पद्धतिभन्दा ठिक उल्टो कार्यशैली अपनाए । सल्लाह सुझावलाई लत्याएनन् मात्र आफ्नो मनखुशी नियुक्ति , भेटघाट अनि निर्णयहरु गर्दै गए । जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार सरकारको नेतृत्व कुशलतापूर्वक गर्न सकेनन् । अनेकन विवादको चक्रव्युमा फसे ।
त्यो चक्रव्युँह अरुले नभई आफ्नै सल्लाहकार अनि विश्वास पात्रको कर्मले निर्माण भएको हो । तर कमरेड ओलिलाई त्यो विश्वास पटक्कै लाग्दैन । जुन चक्रव्युँहमा उनी यसरी फसेका छन् , त्यसबाट फुत्त निस्कन निकै गाह्रो छ । सशस्त्र धारी अभिमन्युले त चक्रव्युँह तोड्न सकेनन् भने बोली र कामको टुंगो नहुने व्यक्तिको हालत झन के होला ? यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कमरेड ओलि यति धेरै जब्बर हुन आवश्यक थिएन । देशमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्न अनि रोजगारको सिर्जना गर्न लिडेढिप्पी गर्नुपर्थ्यो। तर, त्यो हुन सकेन । यसको उल्टो गरि प्रधानमन्त्रीको दिमाग घुम्यो। अथवा कसैले घुमायो । किनकि प्रधानमन्त्रीको घमण्डी र व्यक्तिवादी व्यवहारले आफ्नो पार्टीको विधि अनि पद्धतिको दाहसंस्कार गरिदिए ।
कमरेड ओलीको यही आचरणले वाक्क दिक्क भएर नै सचिवालयका सद्स्यहरु एउटा निर्णयमा पुग्न बाध्य बने । तसर्थ, कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति गम्भीर रुपमा असहमति राख्दै प्रतिवेदन दर्ज गर्न बाध्य भए । जुन पार्टी सचिवालयका पाँच जना सदस्यले प्रतिवेदनमा गम्भीर रुपमा उठान गरेका विषयहरु सामन्य छैनन् । तर कमरेड ओलिले उक्त प्रतिवेदनलाई केवल ‘आरोप पत्र’को नाम दिए। अनि ती आरोपहरु सहि छन् अथवा झुठो छन् । त्यसको मुल्यांकन र समिक्षा ओलि आफैले मात्र गरेर हुन्न । किनकि कमजोरी अथवा आरोप मध्ये कुन चाहिँ सहि हो त ? फैसला हुनुपर्छ । दुवै ठिक अथवा दुबै बेठीक भन्न अब मिल्दैन ।
सरसरती हेर्दा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलिले सरकार अनि पार्टी बदनाम हुने अनेकन हर्कतहरु गरेका छन् । भ्रष्टाचारमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । विदेशी खुफियालाई लुकेर भेटेका छन् । भ्रष्ट व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिदै खुशी पारेका छन् । राष्ट्रभक्त कर्मचारीको हुर्मत झारेको छ । र, व्यक्तिवादी सोचले सिमा नाघेको छ । आखिर यो हर्कतहरु किन र केका लागि ? के यस्तो कार्यले सरकारलाई सफल बनाउछरु जनता खुशी हुन्छन् ? के कमरेड ओलिले भने झैँ देशमा समृद्धि आउछ ?
यस्तै भनाई अनि गराईले देशमा समृद्धि आउँछ भन्नू गोरु व्याउँछ भन्नु उस्तै हो । त्यसकारण, हिजो कमरेड ओलिले बनाएको साहसिक छवि आज गर्ल्यामगुर्लुम्म ढलेको छ। हिजो ओलिले जनतालाई बाढेको सपना केवल तासको महल झैँ बन्न गयो । तसर्थ आज ओलिको क्रेज मात्र होइन पार्टीको छवि र विश्वासमा पनि नराम्रोसँग धक्का लागेको छ । के यो वास्तविकता हैन ? यदि वास्तविकता हो भने आखिर किन यस्तो हुन गयो ? यसको लेखाजोखा र मुल्यांकन कहाँ गर्ने बालुवाटारमा कि खुमलटारमा ?
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षको कोठामा हैन सचिवालय, स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिसम्म उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन आवश्यक छ । सहि र गलत के हो ? छुट्याउन जरुरी छ । तर, पार्टीको अध्यक्षले आज त्यही स्थायी समितिलाई अर्को नाम दिए( रत्यौली खेल्ने स्थान । के पार्टीको स्थायी समिति भनेको रत्यौली खेल्ने ठाउँ हो ?
देशमा उथलपुथल ल्याउने क्रान्ति, राजनीतिक रुपान्तरण र सामाजिक परिवर्तन सम्पन्न गर्न सफल पार्टीको स्थाई समिति आज आफ्नै अध्यक्षले चिन्न सकेनन् । यो जस्तो दुःखद र अपमानित के होला ? अनि पार्टीको समिति चिन्न नसक्ने व्यक्ति कसरी अध्यक्ष हुन् सक्छ ? यहि कारणले आज ओलि बद्नाम छन् ।
त्यसकारण, हरेक कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षसँग यसको जवाफ माग्नुपर्छ । कमरेड ओलि पार्टीको स्थाई समिति रत्यौली खेल्ने स्थान होइन, छिनोफानो गर्ने ठाउँ हो । जहाँ गलत कार्यशैलीको छिनोफानो गर्नुपर्छ । र, भोलिका दिनमा ओलि प्रवृतिको मात्र होइन, क्रान्तिकारी शक्तिलाई मजबुत बनाउदै गलत प्रवृति सबैको छिनोफानो गर्ने समिति बनाउन आँट गर्नुपर्छ ।